Ibhalbhu yokukhanya ye-LED yangaphakathi, iTube ye-LED, i-LED Ceiling Light -Ayina
Ii-LED ezininzi kunanini na ngaphambili: Ngoluhlu lwethu olubanzi lwezibane ze-LED, ngoku sikunika ukhetho olunomdla lweemveliso zoluhlu olubanzi lweemfuno zokukhanyisa-kunye nezinto ezininzi ezintsha.
Sebenzisa isenzo sethu ukwenza ixabiso kubathengi
I-Aina-4 Technologies (Shanghai) Co., Ltd. yinkampani yabucala elinganiselweyo ebhaliswe eShanghai, eChina. Isebenza ngokukodwa kwi-R&D, ukuyila, ukwenza, kunye nokuthengisa imithombo yokukhanya okukhupha ukukhanya kunye nezibane zokukhanyisa. Lishishini elenziwe ziinkampani ezine (4) ezingoovulindlela ezikhanyisayo, ezibeka izixhobo zazo ndawonye ukuze zivelise iimveliso kunye neenkonzo ezidala uzinzo kungekuphela nje kokusingqongileyo, kodwa noqoqosho kunye noluntu inkampani ekhula nalo.
Isangqa esiLula izibane ze Ceiling Dimming Ceiling LED...
IiMveliso eziNtsha kwiGumbi lokuHlala iGig Round yeLed yanamhlanje...
Igumbi lokulala 24w 36w Ukutshintsha Umbala oMbala ocimayo ...
Amagqabi anamhlanje aneThamsanqa Alayita Agungxula iSeyile yeNtaba...
Umda wangaphakathi ojikelezayo oBone isibane sokukhanya kwiseyili unyuselwe ...
Ihlabathi elinomdla lokukhanya kwe-LED
Zivumele ukhuthazwe ngamabali e-LED ahluke kakhulu
Ukukhanya okutsha kunye nokungabizi kunye ne-LED
Okwangoku, ngenxa yezizathu ezahlukeneyo, ikowuteshini yethu yokuthumela ngaphandle kwezibane inokugcinwa kuphela iiveki ezimbini. Kutheni le nto isenzeka? Ezona zizathu ziphambili zezi zilandelayo: 1, Umlinganiselo woMbane: Okwangoku, ukuveliswa kwamandla asekhaya ikakhulu kuxhomekeke kwizixhobo zombane ukuvelisa umbane ngamalahle. Nangona kunjalo,...
Ngemibuzo malunga neemveliso zethu okanye uluhlu lwamaxabiso, nceda ushiye i-imeyile yakho okanye i-whatsapp kuthi kwaye siya kuqhagamshelana kwiiyure ezingama-24.
Umxube onomdla weemilo zakudala, itekhnoloji yefilament enesitayile, ukukhanya okuhle kunye nokusebenza kakuhle kwamandla